Dayniile Online daily news From Somalia Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.	Kaniisadii Masiixiga ee ku taalay magaalada Muqdisho oo Dagaaladii ka dhacay halkaas Madaafiic lagu duqeeyey ayaa hada waxaa ku Nool Barakacayaal fara badan (Halkaan ka Daawo Caalamka oo arintaan ka Qeeyliyey)
Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.	Inta badan Jaraaidyada ka soo baxa dalalka Yurub wexeey maqaal ama Sawiro ahaan u soo qaateen War Muuqaal ahaa oo eey soo tabisay Wakaalada Wararka ee (AFP).
War bixintaan waxaa lagu sheegay Kaniisadii ku taalay Magaalada Muqdisho ee Dadka Masiixiga ah eey Caabudi jireen xiliyadii Nabada in hada si xun loo dayacay oo weliba Madaafiic culus lagu Duqeeyey.
Inta badan Jaraaidyadaan wexeey soo bandhigeen Cadeeymo lagu sheegay in kooxaha Soomalida ah ee ku Dagaalama gudaha magaalada Muqdisho eey ku Tijaabiyaan Hubkooda qatarta ah dhismaha ama gidaarada Kaniisada oo ka sameeysan Shub aad u adag.
Halkaan ka Daawo Kaniisadii Muqdisho oo si xun loo Duqeeyey Magacyada iyo kooxaha Falkaas geeystay ma xusin War bixin taan balse waxaa qoraalkaan la daba dhigay in Dadka Muslimiinta ah ee ku leh Masaajidada wadamada Yurub kuna Nool Qaarada Yurub eey ka helaan Bulsho weeynta Masiixiga ah xushmo iyo qadarin halka Kaniisadaha ku yaal Dalalka Islaamka eey inta badan la kulmaan dhibaatooyin joogto ah iyo Cabsi kaga timaada dad Mayal adag.
Wakaalada Wararka ee AFP wexeey si toos ah u soo bandhigtay Kaniisadii Dadyoowga Masiixiga ah eey ku lahaayeen magaalada Muqdisho oo Madaafiic xoogan iyo Bur bur baaxad leh uu ka muuqdo waxeeyna sheegtay Wakaalada AFP in Kaniisada dhexdeeda eey ku nool yihiin ama Hooy ka dhigteen Dad Shacab ah oo ka soo Barakacay Abaaraha ka jira Koonfurta dalka Somalia.